Somaili News and Resources in Minneapolis – Hiiraan News
Nin bisad isku e keeysiiyey kadibna is dilay (Daawo Sawirada)
Ciidamada Booliiska Dalka Koonfur Afrika ayaa xiray nin asalkiisu uu kasoo jeedo Dalka Zimbabwe oo kunoolaa Gobolka Westren Cape, kaa oo lagu helay in uu doonayay in uu dilo kadibna wadnaheeda uu cuno gabar uu jeclaa.
Dhacdadan ayaa ka dhacday Deegaanka lagu Magacaabo Kukuleto oo ku dhaw Magaalada Cape Town ee Dalka Koonfur Afrika, waxaana la sheegay in ninkan midi iyo fargeeto uu watay in uu caloosha ka galiyay gabar uu jeclyahya uuna doonayay in uu cuno Wadnaheeda.
Daddy daris la ahaa Ninkan oo kusoo baxay qeylada gabadha ayaa durba wacay Booliiska oo ninkaasi gacanta ku dhigay, waxa uuna ninkan sheegay in uu doonayay in uu cuno wadnaha Gacaslisadiisa si uu ugu muujiyo in uu jecelyahay.
Ninkan doonayay in uu cuno Wadnaha gacalisadiisa ayaa hada xiran, waxaana la filayaa in maalmaha soo aadan maxkamada lasoo taago si loogu qaado dambiga loo heesto, Booliiska ayaan wali soo bandhigin magacyada lamaanahan.
Dadka kunool Deegaanka dhacdadan uu ka dhacay ayaa aad ula yaabay falka uu ninkan asalkiisu kasoo jeedo Dalka Zimbabwe ku dhaqaaqay, waxa ayna dadka badankiis ay falkaasi uu ninkan damacsana ku tilmaameen mid waali ah.